HALKAN KA AKHRISO W/W .MOGTIMES ISNIIN 12-KA ABRIIL 2021
Monday April 12, 2021 - 09:17:50 in Wararka by Super Admin
RA’ISUL WASAARE ROOBLE OO XILALKA ISKUGU BEDDELAY 2 WASIIR
Ra’iisul Wasaaraha xilka siihaya ee Sooma aliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xi lalkii u kala badalay laba wasiir oo ka tirsan xuku umadda Soomaaliya.
Wasiirkii Gaadiidka iyo Duulista Hawada Max amed Cabdullaahi Oomaar ayaa laga qaaday xilkii uu hayey, waxaana loo dhiibay xilka Wasiirka Sha qada iyo Arrimaha Bulshada.
Sidoo kale Duraan Axmed Faarax oo ahaa Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa loo magacaabay xilka Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada.
Isbedelka uu sameeyey Rooble ayaa ka dam beeyay dalab ka yimid Madaxweynaha muddo xil eedkisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo Ra’iisul Wasaaruhu uu tixgeli yay.
Ma cadda sababta keentay tallaabada uu qaad ay Rooble, waxaana xusid mudan in Oomaar uu ka mid yahay wasiirada ugu muddada dheer, isaga oo horey ula soo shaqeeyey ra’iisul wasaare Xa san Cali Kheyre, halka Duraan uu xilka joogo un wax ka yar 6 bilood, isaga oo la magacaabay mar kii uu xilka la wareegay Rooble.
Wararka qaar ayaa sheegay in isbeddelan ay ka mid tahay arrimaha siyaasadeed iyo danaha ku xeeran xilliyada doorashada.
Iskushaandheynta kooban oo uu Maanta sam eeyay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiin ta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa ay ku soo aadeysaa xilli uu dhamaaday muddo xileedka Hay’adaha dowladda, isla markaana khilaaf uu ka taagan yahay doorashada.
Sidoo kale waa markii ugu horeysay ee uu Ra’I sulwasaare Rooble isku shaandheyn ku sameeyo Golihiisa Wasiirada tan iyo markii uu 19 Sept ember 2020 magacaabay Xukuumadiisa kusoo aaday xilliga kala guurka siyaasadeed.
XOG: WAANWAAN LAGA DHEXBILAABAY MADAX DA SOOMAALIDA IYO WARARKII U DAMBEEYEY
M/Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa ka socda dadaallo xoogan oo ay wadaan dhinacyo kala duwan, kuwaas oo la doonayo in la’isugu soo dhoweeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka.
Dadaallada socda ay aa ujeedkooda waxa uu yahay sidii ay markale mi iska wadahadalka isugu soo noqon lahaayeen hoggaamiyeyaasha Soomaaliyda, si xal loo wada gaaro.
Wararka ayaa sheegaya in dadaallada iyo waanwaanta socota ay qeyb ka yihiin wakiilada beesha caalamka, siyaasiyiin, hoggaanka ururada bulshada rayidka iyo dhaqanka.
Ilo ku dhow dhinacyada wada dadaalladaasi ayaa shaaca ka qaaday in madaxda dowladda fed eraalka iyo qaar ka mid ah kuwa dowlad goboleed yada ay ka cagajiidayaan waanwaanta laga dhexbillaabay ee lagu doonayo in dib loogu sii ambaqaado wadahadallada.
kale xubnaha wada dhexdhexaadinta ayaa ra jo wanaagsan ka muujiyey inay guuleysan doonto waanwaantooda, islamarkaana ay dib u billaaban doonaan shirarkii u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul gobole edyada.
Dhowaan ayey aheyd markii dowladda Soomaa liya ay shaaca ka qaaday inay fashilmeen wadahadalladii gogol xaarka ee ka socday Teendhada Afisyoone ee Muqdisho.
ROOBLE OO AMAR SIIYAY HAY’ADDAHA AMNIGA DOWLADDA FEDERAALKA
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka So omaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay kulan gaar ah xafiiskiisa kula qaatay Taliyeyaasha Ciidamada dowladda Feder aalka.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay howlgaladii ugu dambeeyay ee Ciidanka Xoogga ka fuliyeen Gobolada dalka, xoojinta amniga Caasimadda iyo u diyaar garooga dhinaca amniga inta lagu jiro bi sha barakeysan ee Ramaadan.
Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in kulanka inta uu socday Ra’iisul Wa saare Rooble uu warbixino kala duwan oo xiriiray amniga uga dhageystay Saraakiisha Ciidanka ee uu la kulmay.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa laamaha amn iga ku amray inay dardargeliyaan xoojinta am ni ga Caasimadda dalka ee Magaalada Muqdisho in ta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo xiliyada qaarkood ay dhacaan falal amni darro.
Sidoo kale Rooble ayaa Saraakiisha Ciidanka qey bahooda kaladuwan ugu baaqay inay wada sha qeyn yeeshaan, isla markaana la iska kaa shado sidii looga hortegi lahaa wax kasta oo keeni kara amni darro dhacda.
Si kastaba Kulankaan uu Ra’iisul Wasaare Ro oble la qaatay Saraakiisha laamaha amniga dow lad da ayaa waxaa uu kusoo aadaya, iyada oo la guda galayo bisha barakeysan ee Ramadaan oo marar qaarkood ay dhacaan falal amniga lid ku ah.
TALIYE ODAWAA YUUSUF OO FARRIIN U DIRAY CIIDA MADA XOOGGA DALKA
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa Ciidanka Xoogga dal ka Soomaaliyeed ugu hambalyeyay Sanadguur ooda 61aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay Ciidamada 12 April 1960kii.
Taliyaha Ciidanka Xooga dalka ayaa guud ahaan Ciidanka Xoogga dalka ugu hambalyeey munaasabadan ee aas aaska oo sanada jirsaday 61sanno, isagoo ku boggaadiyay Cii damada howlgal ada ay wadaan.
"Run ahaantii maanta waa maa leyn weyn, Wax aa lasoo maray marxa lado kala duwan, maantase Ciidanka XDS wuxuu marayaa marxalad ah geed curdun ah oo u baahan waraab ayuu yiri Jeneraal Odawaa.
General Odowaa Yuusuf Raage ayaa saraakii sha ,saraakiil xigeenada ,Dableyda, Alif leyda iyo waliba qoysaskooda ayuu hambalyo u diray da baal dega Aas aaska sanad guurada Ciidanka Xo ogga dalka iyo sidoo kale guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
"Waxaan Allah SWT uga baryayaa in uu naxari istii janno siiyo dhamaan shuhadadii naftooda u hurtay difaaca Qaranka iyo ilaalinta sharafka muw aadiniinta Soomaaliyeed, inta dhaawaca ahna Rabbi ha siiyo Caafimaad degdeg ah, inta Caafi maadka qabtana waxaan u rajeynayaa in ay hal kooda kasii wadi doonaan difaaca Qaranka” ayuu sii raacsiiyay Qoraalkiisa. Ugu dambeyn Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa shaaciyay in la jooji yay Munaasabad loogu dabaaldegi lahaa sanad guurada Ciidanka, isagoona sababta loo joojiyay Munaasabadda ku sheegay inay tahay Arrimo la xiriira Cudurka COV ID19.
CIIDAMO BADAN OO LA GEEYAY BARAHA KOONTAR OLADA XARUNTA MADAXTOOYADA
Ciidamo farabadan oo ka tirsan Booliska dow ladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hay’adda NISA ayaa saakay lagu arkayaa baraha Koont aroolada lasoo galo Xarunta Madaxtooyada Soo maaliya.
Ciidamadan oo wata gaadiidka nooca dagaal ka ayaa ku sugan inta badan waddooyinka soo ga la iyo kuwa kabaxa Xarunta Mad axtooyada, wax aana la sheegayaa in Ciidanka halkaas ay dhigtay dowladda Federaalka.
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlama anka Federaalka ee muddo xileedkoodu dhamma aday ayaa Maanta waxaa la filayaa in kulan aan caadi aheyn ku yeeshaan Xarunta Villa Hargeysa ee ku dhex taalla Madaxtooyada.
Ajendaha kulanka Xildhibaanada ayaa waxaa uu yahay ka doodista Mooshin ku saabsan Doora shooyinka Qaranka, sida lagu shaaciyay qoraal kasoo baxay Guddoonka Golaha Shacabka, loona diray Xildhibaanada.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in kulan ka uu ka bilowdo Xarunta Villa Hargeysa, waxaana qaar kamid ah Xildhibaanada ay sheegeen in Gud doonka uu doonayo in muddo kordhin uu u sam eeyo hay’addaha dowladda iyo Madaxwey naha waqtiga ka idlaaday.
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa ka horyimid qorshaha lagu doonayo in muddo kor dhin loogu sameeyay Baarlamaanka iyo Farmaajo, iyagoo ka digay tallaabadaas oo ay ku tilmaameen mid dalka uga sii dari karta xaaladda Cakiran ee uu ku jiro.
BOQORKA URDUN IYO WALAALKIIS OO MEEL LAGU WADA ARKAY, KADIB KHILAAFKII
Boqorka dalka Jordan Cabdullah iyo dhaxal sugihii hore ee dalkaas oo sidoo kale walaalkiis ah Amiir Xamza ayaa me el lagu wada arkay markii ugu horreysay tan iyo intii uu muranku soo kala dhex galay, iyagoo maan ta ka wada qeyb galay xafladda sanad guurada 100aad ee xornimada dalkaas.
Warbaahinta dowladda ayaa soo bandhigtay sawirrada qoyska boqortooyada oo ku sugan aqalka Raghdan ee Amman.
Xamza ayaa Isniintii la soo dhaafay she egay inuu daacad u noqonati Boqor Cabdalla kaddib markii ay dhexdhexaadin ka dhex same eyeen qoyska boqortooyada, labo maalmood kaddib markii milatarigu uu uga digay inuu ku dhaqaaqo falal ay ku sheegeen inay wiiqayaan ammaanka iyo xasiloonida Jordan.
Arbacadii la soo dhaafay, Boqorka Jord an ayaa sheegay in meesha laga saaray is ma andhaafkii ka dhex taagnaa isaga iyo walaalkii oo ay isku aabbe yihiin isla markaana Xamza uu boqortooyada kula sugan yahay qoyskiisa.
MIDOWGA MUSHARAXIINTA OO DIIDAY MUDDO KORDHIN LOO SAMEEYO FARMAAJO
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha So omaaliya ayaa kasoo horjeestay qorshe lagu do onayo in hay’addaha dowladda Federaalka iyo Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Farmaajo loogu sameeynayo muddo kordhin.
Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Sheekh Shariif Sh Axmed oo saqdii dhexe ee xalay warb aahinta kula hadlay Muqdisho ayaa waxaa uu she egay in xiligaan dalka uusan u baahneyn muddo kororsi, isagoona eedeyn u jeeday Madaxweyne Farmaajo.
Sheekh Shariif ayaa sheegay in Madaxweyna ha uu dhowr jeer kasoo kacay shirar looga hadlayo Arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka taagan, isla markaana uu ugu damb eeyay shirkii Madaxda uga socday Teendhada Afisyo oni, kaasi oo fashilmay.
Waxaa uu Shariifka ka dig ay isku day kasta oo la gu doonayo in muddo kordhin loogu sameeyo Mad axda dowladda ee waqtigoodu dhammaaday, isag oona xusay in arrintaas ay abuuri karto qalalaaso siyaasadeed oo dalka galo.
Sidoo kale waxaa uu Sheekh Shariif nasiib dar ro uu ku tilmaamay in iyada oo ay Maanta ku beeg an tahay munaasabadda Ciidanka Xoogga Dalka ee 12 April ay Madaxtooyadu isku daydo inay ay ku boobto awoodda ciidanka, muddo kordhin aan sharci aheyn.
"Waxaan aaminsanahay inay tahay Khiyaano Qaran in iyadoo doorashada laga heshiin karay oo ay dowladdu dayacdey in maanta la isku dayo muddo kororsi, waxaana leenahay hogaanka dow ladda waqtigeedu dhamaadey waad ambateene soo noqda, oo Soomaaliya ha u horseedina inay dib ugu laabato wixii laga yimid” ayuu yiri Shariifka.
Ugu dambeyn Sheekh Shariif ayaa shacabka So omaaliyeed, dowlad Goboleedyada iyo iyo Beesha Caalamka u sheegay in wixii ka dhasha muddo kororsiga la qorsheeyay in aan lala wadaagi doo nin Madaxda dowladda Federaalka ee waqtigoodu dhammaaday.
QM, MIDOWGA YURUB, IGAD IYO AU OO FARRIIN CAD U DIRAY DF IYO DOWLAD GOBOLEEDYADA
QM, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo IGAD ay aa yeeshay kulan looga hadlay wax ay ugu yee reen "halista xooggan,” ee ka dhalan karta doora shada dib loo dhigay ee Soomaaliya iyo ismari waaga wadahadallada madaxda dowladda fed eraalka iyo dowlad goboleedyada.
Kulankan ayaa waxaa yeeshay kaaliyaha xo ghayaha guud ee QM ee arrimaha siyaasadda Ro semary DiCarlo, agaasimaha Afrika ee Midowga Yurub Rita Laranjinha, madaxa siyaasadda ee Mid owga Bankole Adeoye, iyo xogahayaha guud ee IGAD Dr. Workneh Gebeyehu.
Qoraal ay soo saareen kadib kulankooda ayaa ururadan waxay ku sheegeen inay si aad ah uga walaacsan yihiin in ismari waaga siyaasadda uu saameyn xun ku yeelanayo nabadda, ammaanka, xasilloonida iyo baraaraha Soomaaliya.
"Waxaan dib u caddeyneynaa go’aanka ah ina an taageeri doonin hanaanka kasta oo ah door ashooyin isbarbar socda, kuwa hal dhinac ah ama hindise kasta oo cusub oo hoggaamin kara muddo kordhin kasta oo lagu sameeyey muddo xileedya dii hore,” ayey qoraalkooda ku yiraahdeen QM, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo IGAD. Waxay sidoo kale ugu baaqeen hoggaamiyay aasha Soomaalida inay danta qaranka ka hormar iyaan midda shakhsi, ayna dib ugu soo laabtaan wadahadallada, si ay u raadiyaan istanaasul ku aadan arrimaha la isku hayo, una xaqiijiyaan inaan marnaba la qaadin ficillo dhaawici kara xasill oonida Soomaaliya.
"Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyayaasha Soomaalida inay sii wadaan horumarkii laga sam eeyey dhisidda dowladnimada, iyo siyaasadaha loo dhan yahay, gaar ahaan doorashooyinka iyo si nabdoon xukun isugu wareejinta,” ayaa lagu yiri qoraalka.
QM, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo IGAD ayaa ugu dambeyn sheegay in si dhow ula socon doonaan xaaladda Soomaaliya
QOORQOOR: MUSHARRAXIINTA AYUU IILA MID YAHAY FARMAAJO
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galm udug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) oo war eysi gaar ah siiyey TVga Soomaali Cable ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ah, sida shirkii Afisyo one, cabsida laga qabo in la sameeyo muddo kor orsi horleh, cadaadiska xoogan ee ka imaanaya dhanka beesha caalamka iyo qodobo kale oo xasaasi ah.
Wareysigan oo hordhiciisa lasii daayey ayaa Qoor Qoor waxa uu kusoo hadal qaaday xiriirka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya madax weynaha waqtigiisu dhammaad ay,maadaama uu ka mid ah ho ggaamiyeyaasha maamul gobol eedyada ee taabacsan Villa Soomaaliya.
Qoor Qoor ayaa shaaca ka aaday haddii uu Farma ajo si rasmi ah ugu dhowaaqo musharraxnimadiisa uu ula mid noqon doono musharraxiinta kale ee sa nadkan 2021ka u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee afarta sano ee soo soc ota.
"Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) haddii uu murashax hadda waa uun sheegsheegee joogtaa hee uu murashax noqdo bannaanka soo istaago musharraxiinta ayuu iila mid yahay.” ayuu ku yiri hordhaca wareysiga lala yeeshay Madaxweyne Qoor Qoor. Wareysiga uu bixiyey madaxweynaha Galmudu g ayaa kusoo aadaya, xilli xasaasi ah, islamar kaana dowladda Soomaaliya ay shaacisay in lagu kala tegay wadahadaladii Afisyoone.
Si kastaba Soomaaliya ayaa haatan ku jirto mar xalad adag oo kala guur ah, waxaana weli is mariwa uu ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka ee dhacaya sanadkan.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Punt land, Mudane Cabdullahi Cali Xirsi TimoCadde ayaa maanta markale ku celiyay maamulka Punt land uu diyaar u yahay inay sii socdaan wadahad aladii teendhada Afisyoone, oo dowladda ay sheegtay inay fashilmeen.
TimoCadde ayaa sheegay in ma daxda sarre ee Puntland ay ogol yihiin "go’aan raadinta xal doora sho,” midaasi oo si wadaogol ah lo ogu geli lahaa doorashada dalka, oo xiligan uu ka taagan yahay khilaaf xoogan.
"Puntland weli waxay joogtaa miiskii wadaxaaj oodka ee lagu balamay. Waxaa naga go’an raadinta xal doorasho loo dhan yahay lagu geli karo, si Dalka xasilooni darro siyaasadeed looga badbaadiyo,” ayuu yiri Wasiir Timocadde oo qor aal kooban ku baahiyey bartiisa twitterka.
Sidoo kale waxa uu ka dalbaday madaxweyna ha waqtigiisu dhamaaday inuu kusoo laabto miis ka wadahadalka, si xal kama dambeys ah looga gaaro caqabadaha ku horgudban shirweynaha doorashada.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in heshiis dhina cya da isku haya doorashada ay gaaraan uu dal ka ka badbaadinayo xasilooni darro siyaasadeed.
Wasiirka ayaa hore u sheegay in Puntland ay u taagan tahay ilaalinta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka u yaalla dalka, isaga oo ku eedeeyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ku tu maneyso shuruuda, taas oo uu tilmaamay in si weyn la’isugu hayo.
Hadalkaan ayaa imanaya, xili ay dhawaan dow ladda federaalka ay shaacisay inay fashilmeen wadahadalladii ka socday teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho, ayada oo eedey fashilka du sha u saartay hoggaamiyeyaasha Jubbaland iyo Puntland.
DIYAARAD SIDDA TALLAALKII LABAAD EE COVID19 OO SOO GAARTAY MUQDISHO
Diyaarad sida 200.000 oo Talaalka Covid19 nu uca Sinopharm Vaccine oo ay dowladda China u gu deeqday Soomaaliya ayaa Shalay soo gaartay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaa lada Muqdisho.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka XFS iyo masuuliyiin kale ayaa kala wareegay agabkaan safiirka dowladda China u fadhiya Soomaaliya Mr Qin Jian.
Dhawaan Safiirka jamh uuriyadda Federaal ka Soo maaliya u fadhiya dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kulane ayaa la saxiixday dowladda dalkaas heshiis tallaalka looga hortago cudurka COVID19 shirkadda Sinopharm ee dalka Shiinaha lagu keenayo Soomaaliya.
Amb, Cawaale Cali Kulane ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in talaalkan ay dowl adda Shiinaha ay dalkeena ugu deeqdo si Bulsha da Soomaaliyeed ee uu dhibaatada ku hayo Cud urka Cornavirus uga hfaa’iideystaan.
MAHAD DOLLAR OO LAGU DILAY MUQDISHO IYO ALSHABAAB OO WAR KASOO SAARTAY
Kooxo ku hubeysnaa bastoolado ayaa Xaaf adda Seybiyaano ee Degmada Hodan ku dilay Maanta sarkaal caan ka ahaa xaafadda kana tirsa naa Cidamada Booliska Soomaaliya.
Sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Gaashaanle Mah ad Cali Cilmi (Mahad Dollar), wax aana lagu toogtay Garaash ku yaa lla agagaarka Seybiyaano halkaas oo ah suuq lagu iibiyo qudaarta iyo Caanaha oo uu isaga mas’uul ka ahaa.
Kooxaha dilka geystay ayaa marxuumka dho wr xabad kaga dhuftay qeybaha sare ee jirka, wa xaana ugu dambeyn u suurta gashay inay meesha isaga baxsadaan, inkastoo ciidamo ka tirsan kuwa Booliska ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan ragga falka geystay.
Sarkaalka dilka loo geystay ayaa caan ka ahaa Muqdisho, gaar ahaan Degmada Hodan, wuxuuna heystay ciidamo gaar ah oo isaga ka amar qaata.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay, kuwaas oo goob ta ka qaaday meydka, islamarkaana geeyay xarun ta Hay’adda dambi baarista ee CIDda.
Kooxda AlShabaab ayaa sheegatay mas’u uliyad da dilka loo geystay sarkaalkaan, waxayna AlShabaab ku sheegtay inuu ahaa sarkaal muddo badan hor taagnaa shacaa’irta Islaamka sida ay hadalka u dhigtay.
Warbaahinta ku hadasha Afka Kooxda AlSha baab ayaa sheegtay in sarkaalkaan lala dilay cii damo ka tirsanaa ilaaladiisa inkastoo aysan jirin illo madax banaan oo xaqiijinayo sheegashada AlShabaab.
Ma aha markii u horeysay ee Sarkaal ka tirsan ciidamada ay dabley hubeysan ku toogtaan magaalada Muqdisho, haddana waxay dhacdadan kusoo aadeysa xili uu dalka marayo marxalada xasaasiya.
Kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ayaa gudaha dalkaas waxaa ay Habeen hore ku dileen muwaadin Soomaaliyed oo kamid ahaa Soomaalida ku Ganacsada dalkaas, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Muwaadinka Soomaaliyeed oo Magaciisa lagu soo koobay Ilyaas ayaa rag hubeysan ay rasaaseeyeen isaga iyo Saddex Dhalinyaro ah oo la socotay Gaari ay saarnayeen xilli ay ku sugnaayeen Xaafadda Elsies River ee Magaalada Cape Town.
Mid kamid ah Soomaalida ku nool Xaafadda Elsies River ee Magaalada Cape Town ayaa sheegay in rasaas xoogan lagu furay Gaariga uu waday Muwaadinka dhintay iyo Saddex kale, hayeeshee ay ka badbaadeen Dhalinayaradii kale.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Koonfur Afrika ayaa tegay Xaafada uu dilka ka dhacay, iyaga oo baadi goobayay Kooxihii ka dambeeyay falkaasi dilka ah si ay Gacanta ugu soo dhigaan.
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa aad loogu dhibaateeyaa Soomaalida ku nool dalkaas, waxaana sanadkaan 2021 la dilay in ka badan 10 Dhalinyaro ahaa, kuwaas oo kamid ahaa Soomaalida ku Ganacsatada Magaalooyinka kala duwan ee dalka Koonfur Afrika.
MARKAB RASAAS KU FURAY CIIDAMO KA TIRSAN ILAALADA XEEBAHA GALMUDUG
Labo qof oo mid yahay taliye Kuxigeenka Ciidanka Ilaalada xeebaha Galmudug ee Degmada Hobyo ayaa ku dhaawacmey rasaas uu ku furay markab.
Markab ayaa ka mid ah maraakiibta sida sharci darada ah uga kaluumeysta Xeebaha Dalka oo ku soo dhawaadey xeebta Hobyo.
Dhaawaca ragan ka tirsan Ciidamada ilaalada xeebaha Galmudug ayaa yimid xili ay isku dayeen in ay ku dhowaadaan markab ay cabasho ka keeneen kaluumeysatada Deegaanka kaasi oo in mudo ahba xeebta dhow ee Hobyo ka wadey xaalufin ba’an.
Markabka ayaa la sheegay in uu dib u sigaday markii is rasaaseyn ay dhexmartay labada dhinac, waxaana ciidanka Galmudug ay dib ugu soo laabtaan Hobyo.
MAXAABIISTII LAGU WAREEJIYAY DOWLADDA SOOMAALIYA OO MUQDISHO LA KEENAY
M/Muqdisho gaar ahaan Garoonka Diyaara da Aaden Cadde waxaa lagu soo Dhaweeyey Maxaabiistii Dowladda Federaalku Shalay kala soo wareegtay maamulka Puntland, kuwaas oo gaaraya 14 Maxbuus loona heysto Burcad bade ednimo.
Waxaa Garoonka ku soo dhaweeyey Maxaabiista iyo Masuuliyiinta waday Sa natar Cabdi Qeybdiid oo ka tirsan Xildhibaanna da Aqalka Sare iyo Masuuliyiin ka tirsan Dowla dda Soomaaliya iyo Bulsho Reer Galmudug ah oo ku faraxsana Soo wareejinta Maxaabiistaan.
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladdda Xukuu ma dda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nu ur Jaamac oo Garoowe ka keenay maxaabiista ay aa u mahad celiyay Wasaaradda Cadaaladd a dowlad goboleedka Puntland iyo dhamaan ba hda Cadaaladda ee labada heer.
Sidoo kale Wasiirka waxaa uu sheegay in Wa saaradda Cadaaladda ay dadaal ugu jirtaa in adeega cadaaladda shacabka loo dhoweeyo si Bulshada Soomaaliyeed u helaan Cadaalad.
TIRADA DADKA UU SOO RIDAYO CUDURKA KAROON AHA OO SII KOROTAY
Wasaaradda Caafimaadka dowladda Soo maaliya ayaa faahfaahisay kiisaskii ugu dam beeyay ee Cudurka Karoonaha.
Tirada 48 saac ee ugu dambaysay laga baa ray COVID19 guud ahaan wadanka: 1,538
o Laga Helay: 135
o Somaliland: 67
o Puntland: 43
o Hirshabelle: 10
o Banadir: 10
o Jubbaland: 3
o Galmudug: 2
o Lab: 87
o Dhedig: 48
o Dhimasho: 13 (Somliland:10, Jubbaland:2, Ba nadir:1)
o Bogsashada: 93
Tirada Guud ee Laga Helay: 12,406
Bogsashada Guud: 5,222
Dhimashada Guud: 618
MADAXWEYNAHA SOMALILAND OO KA HADLAY SHIRKA TEENDHADA AFISIYOONI
Madaxweynaha Soomaliland Muuse Biixi Ca bdi ayaa markii ugu horreeysay waxaa uu ka hadlay shirkii Mad axda dowladda, D/Goboleedya da & G/G/Banaadir ay ku yeesheen Teendhada Afisiyooni ee M/ Muqdis ho.Madaxweyne Muuse Biixi waxaa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Soomaalida dad khaas ay u ogolyihiin in ay ka hadasho arrimaha kajra M/Muqdisho, isaga oo sheegay in uu la yaaban yahay. Soomalida ay raadinayaan midnimada Soomaaliya, iyada oo ay kaliya dad gar ah u ogol yihiin inay ka hadlaan Arrimaha Muqdisho oo ah Caasimadda Soomaaliya waana wax aan is qaadaneyn ayuu
"Waxaa layaab igu ah in hoggamiyeyaasha yiri” Madaxweyne Muuse Biixi.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Soomaliland Mu use Biixi Cabdi waxaa uu sheegay in hadallada qaar ee hoggamiyeyaasha Soomalida iyo inay ku mashquulaan Soomaaliland ay dadka kala fogeeyneyso.
Hadalka Madaxweynaha Soomaliland ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Shirkii ka dhacay Teendhada Afisiyooni aan wax horur ah laga ga arin, isla markaana Madaxda dowladda iyo Dow lad Goboleedyada ay ku kala tageen.
MADAXWEYNE LAFTAGAREEN OO GAARAY MAGAALADA BAYDHABA
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxmed Laftagareen ayaa gaaray Magaalada Baydhaba ee xarunta ku meel gaarka u ah Maamulkaasi.
Safarka Madaxweyne Lafta Gareen ayaa ah mid gaaban oo labo cisho qaadan doona, wax aana Baydhabo kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulkaasi Koonfur Galbeed.
Laftagareen ayaa dib ugu soo laaban doona Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaa lliya.
M/Muqdisho ayaa wax aa ku sugan dhamma an Madaxweynayasha Maamul Goboleedyada dalka, waxaana la filayaa in dib mar kale ay isugu soo laabtaan, waxaana socda dadaalo la doonayo in dib loo ambaqaado shirkiifashilmay.
Cabdiraxmaan Maxamed oo ah guddoomiy aha xisbiga mucaaradka ee Raad, sida oo ka lena soo noqday duqa magaalada Jabuuti ayaa BBC u sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cu mar Geelle uu ku guuldareystay in uu qabto doo rasho xor iyo xalaal ah isla markaana natiijada doorashada aanay waxbo soo kordhin doonin.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Ge elle ayaa markii shanaad loo doortay madax weynaha mar kale hoggaamin doono dalkaas.
Wuxuu ku guuleystay boqolkiiba 98 codadkii la dhiibtay halka mu sharr axa kaliya ah ee la tarta mayay Zakariye Ismaaciil Faa rax uu helay bo qolkiiba 1.59.
Mucaaradka Jabuuti ayaa qaadacay doora shadii shaley ka dhacday Jabu uti kadib markii ay madaxweynaha ku eedeey een in uusan diy aar u ahayd doorasho xor iyo xalaal ah.
Madaxweyne Geelle oo 73 jir ah ayaa xilka Jab uuti hayay tan iyo sanadkii 1999, wuxuuna sii maamuli doonaa Jabuuti shanta sanno ee soo socota.
CIIDAMO GADOODSAN OO XIRTAY WADOOYIN MUHIIM AH
Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawishta dowlad goboleedka Galmudug oo gadoodsan ayaa waxaa ay Shalay la wareegeen saddex Barakoontorool ah oo ku yaal Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Ciidamada oo ka tegay Xera In dha qaris ayaa waxaa ay ka cabanayaan mushaar la’aan, waxaana gaadiidka noocya diisa kala duwan ay u diidayaan inay galaan ama ka baxaan Magalada Gaalkacyo.
Qaar kamid ah Saraakiisha hoggamineysa Ciid amada ayaa waxaa ay sheegeen in in ka badan Saddex bilood aysan qaadan wax mushaar ah, isla markaana ay wayeen xaquuqdii ay ku laha ayeen dowlad Goboleedka Galmudug.
Dhinaca kale Koonfurta Magaalada Gaalka cyo ayaa waxaa ka bilaawday dadaalo ay wa daan Saraakiisha Ciidamada, Odayaasha dhaq anka & Maamulka, kaas oo ay ku doonayaan in Ciidamada dib loogu celiyo Xeradooda, sidoo kalena ay helaan xaquuqdooda.
Dhowr jeer ayaa Ciidamo ka tirsan dowlad Gob oleedka Galmudug waxaa ay sameeyeen Gado od, iyaga oo xirtay wadooyin muhiim ah, balse markii dambe xal laga gaaray
HESHIIS LAGA GAARAY COLAADDA CANFARTA IYO SOOMAALIDA
Waxaa Magaalada Adisababa ee caasi madda dalka Itoobiya lagu soo gabagabeyay wa dahadal u dhaxeeyay madaxweynayaasha dow lad deegaannada Soomaalida iyo Canfarta ka asi oo xal loogu raadinayo dagaallo maalmihii la soo dhaafay labada qoomiyadood ku dha xmaray qaybo ka mid ah gobolka Siti.
Heshiiska waxaa qal inka ku duugay Mada xweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Mus tafe Muxumed Cumar iyo Madaxweynaha Dow lad Deegaanka Canfarta Awal Arba.
Heshiiska nabadeed ee ay labada madaxw eyne ka gaareen colaaddi labada deegaan u dhaxeysay waxaa horkaceysay Wasiiradda nab adda ee dalka Itoobiya Mufariyaat Kaamil.
Labada deegaan xadka ay wadaagaan wa xaa ku dhex maray dagaal uu dhiig badan ku daatay shacab badanna ay ku barakacen.
Shucuubta Soomaalida iyo Canfarta ayaa marar badan ku dagaallama deegaanno ay lab ada deegaan lahaanshahooda kala sheegtaan sida Candhuufa, Cadheyti, Garbaciise iyo tuu looyin kale oo ku yaalla xadaka ay wadaagaan deegaannadaasi.
Iyada oo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waarana laga gaarin shee gashada dhulka la isku hayo waxaa xaaladda sii huriyey guddiga doorashooyinka dowladda dhe xe ee Itoobiya oo soo saaray go’aan ah in 8 tu ulo oo xadka labada deegaan ku teedsan iney doorasha ka dhaceyn shacabka degganna ay codkooda ka dhiibtaan tuulooyinka u dhow ee ay gaari karaan.
XUUTIYIINTA OO DUQEEYEY GAROOMO KU YAALLA SACUUDIGA
Afhyeenka Kooxda Xuutiyiinta Yemen, Kolo nel Yaxye Sariic ayaa sheegay inay Shalayto Di yarado Daroonis oo waxyaabaha qarxa laga bu uxiyey ku weerareen 2 Garoon Diyaaradeed oo ku yaalla gudaha dalkaasi. Duqeynta 1aadwaxay uu xusay inay la beegsadeen Garoo nka Diyaaradaha Dagaalka ee magaalladda Jis aan oo u dhow xuduudka Yemen.
Sidoo kale, wa xa uu sheegay inay weerar 2aad ku qa adeen Saldhigga Ciiddanka Cirka ee magaalada Kha miis Mushayt oo ku taalla K/Gal beed ee Sacuudiga.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Twitterka ay uu ku sheegay inay Duqeyntaasi u adeegsad een 2 Diyaaradaha Darooniska ee noocoodu ya hay QasIf 2.
Afhayeenka Kooxda Xuutiyiinta waxa kale oo uu tilmaamay inay Beegsigaasi kaga aargoo sanayaan Go’doominta ay Isbahaysiga Sacuudi ga geliyeen dalkiisa Yemen, waa sida uu had alka u dhigay.
Dhinaca kale, mar sii horeysay waxay Isba haysiga Scuudiga sheegeen inay Hawada ku burburiyeen Diyaarad Daroonis oo ay Koo xda Xuutiyiinta la maaganaayeen magaalada Kham iis Mushayt oo ku taalla K/Galbeed ee dalkaasi.
DOWLADAHA MASAR IYO BURUNDI OO KALA SAXIIXDAY HESHIIS MILLATERI
Dowladda Masar ayaa sheegtay inay heshiis dhanka iskaashiga militerga la saxiixatay dow ladda Burundi oo ka mid ah dowladaha ku tee dasan wabiga Nile.
Afhayeenka ciidamada Masar, Taamir alRifaaci ayaa sheegay in abaanduulaha ciidam ada Masar Maxamed Fariid iyo taliyaha ciid mada Burundi Prem Ny ongabo ay ku kulem een magaalada Qaah ira iyagoo kawada ha dlay iska ashiga militeri ee labada dal.
Labada dhinac ayaa wada hadalada kadib kala saxiixday iskaashi militeri oo ay ku jiraan tababaro iyo isweydaarsiga khibradaha kala du wan ee labada dal.
Arrintaan ayaa kusoo beegmeysa iyadoo ma almo ka hor Masar iyo Uganada kala saxiixd een heshiis ku saabsanaa iskaashiga amniga iyo sirdoonka.
Dowladda Masar ayaa walaac badan ka qab ta mashruuca biya xireenka Itoobiya, wa xeyna dadaal badan ku bixineysa sidii ay uga hortegi leheed dhameystirka biya xireenka oo laga yaabo inuu saameyn ku yeesho saamiga biyaha Masar ee wabiga Nile.
TURKIGA OO WAR KASOO SAARAY XIISADDA DALALKA UKRAINE & RUUSHKA
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erd ogan ayaa ku baaqay in wadahal lagu dhamee yo xii sada ka taagan bariga Ukraine ee go bo lka Donbas taasi oo ku aaddan qilaafka soo ka la dhaxgalay dalalka Ukraine iyo Ruushka.
Madaxweyne Erdugan ayaa waxa uu walaac ka muujiyay xaalada siyaasada cakiran wax aana uu kulan uu la qaatay dhigg iisa Ukraine ee Ist an bul,ayaa sheegay in miiska wadahadalka la is kugu yimaado waxaana uu inta ku daray in Tur kiga uu diy aar u yahay inuu bixiyo wixii taagee ro ah ee loo baahan yahay.
Erdogan iyo Madaxweynaha Ukraine Volody myr Zelenskyy ayaa wadahadal ku yeeshay ma gaalada Istanbul Sabtidii iyadoo ay jirto xiisad u dhaxeysa Kyiv iyo Moscow oo ku saabsan khilaafka muddada dheer ka socday Donbas.
MASAR OO LAGA HELAY "MAGAALO DAHAB AH" OO QADIIMI AH
Soo helitaanka magaalo 3,000 sano jir ah oo ku dhex luntay ciida Masar ayaa lagu amaanay inay tahay mid ka mid ah waxyaabihii ugu muh iimsanaa ee taarkheed ee la helay tan iyo markii qabriga Tutankhamun. Khabiirka reer Masar ee caanka ah Zahi Ha wass ayaa ku dhawaaqay daahfurka "maga aladana dahabiga ee luntay" ee u dhow Luxor Khamiistii.
Wuxuu sheegay in raadintaasi ay ahayd ma gaaladii ugu weyneyd ee qadiimiga ahayd, ee loo yaqaanay Aten, weligeednaaan laga soo hel in dalka Masar.
Waxaa la soo saaray toddobaadyo gudahood markii la qoday tan iyo laga bilaabo Sebtember 2020.
Magaaladu waxay ku beegnayd xukunkii Amenhotep III, oo ka mid ahaa faraaciintii ugu xoogga badnaa dalka Masar, kaas oo xukumi ji ray 1391 ilaa 1353 BC.
Magaalada waxaa sii waday inay adeegsad aan Faraaciintii Ay iyo Tutankhamun, oo qabri gooda ku dhow laga helay Dooxada Boqortooy ada oo uu ku taqasusay taariikhaha taariikhiga ah ee Ingiriiska Howard Carter sa nadkii 1922.
Betsy Brian, oo ah borofisar ku takhasustay cilmiga Egptology ee jaamacadda Johns Hop kins Uni versity ee Baltimore, Mareykanka ayaa ayaa sheegtay"daahfurka magaaladan lun tay waa daahfurka labaad ee ugu muhiimsan ee la ga helay qabriga Tutankhamun."
Waxay intaasi raacisay "Magaaladuwaxay na siineysaa aragti yar oo ku saabsan noloshii Mas riyiintii hore" waqtigaas oo boqortooyadu ay ah ayd mida ugu taajirsan.
Qoditaankan ayaa waxa uu daaha ka rogay ti ro badan oo ah waxyaabihii qadiimiga ahaa ee la helay,sida dahabka, dhoobada midabada leh, canbaarrada duqsada beenta ah iyo lebenn ada dhoobada leh ee lagu xidhayo Amenhotep III.
Kooxdu waxay ka bilaabeen qoditaanka daan ta galbeed ee magaalada Luxor oo ah meel u dhow Dooxada Boqortooyada, qiyaastii 500 km (300 mayl) koonfurta caasimada Qaahira.
"Toddobaadyo gudahood, kooxda si layaab leh, waxay u soo saareen bulukeetiyo dhoobo ah oo laga arkay jihooyinka oo dhan," Dr Hawa ss ayaa ku yiri bayaankiisa.
"Waxa ay daah fureen wuxuu ahaa goob ma gaalo weyn oo xaaladdeeda badbaadin ku wan aagsan, oo leh ku dhowaad derbiyo dhameysti ran, iyo qolal ay ka buuxaan aaladihii nolol maa lmeedka."
Hadda, toddobo bilood ka dib markii ay qod istu bilaabantay, dhowr aag ama xaafado ayaa la helay, oo ay ku jiraan, deegaammo kale.
"Hawlgallo badan oo ajnabi ah ayaa ragaadi yay magaaladan waligoodna ma helin," ayuu yiri Dr.Hawass,wasiir hore oo ka mid ah waxyaab aha qadiimiga ah.
Waxa uu sheegay inay sii socoto howsha qa diimiga ah kooxdiisuna ay "rajeyneyso in ay soo bandhigaan qabuuro lama taabtaan ah2.
Masar waxay dooneysaa inay horumariso hi ddaheeda qadiimiga ah si ay dib ugu soo noole yso waaxdeeda dalxiiska, ka dib sanado badan oo qalalaase siyaasadeed iyo carqalado uu sab abay cudurka faafa ee coronavirus.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Masar waxay soo qaaday haraadiga saldanadihii hore ee dal kooda iyagoo soo marsiiyay Qaahira iyagoo soo maray hab socod taariikhi ah.
Daawashadii quruxda badneyd ayaa lagu ar kay 18 boqor iyo afar boqoradood oo laga soo daabulay Matxafka cusub ee Masaarida kaas oo masaafo 5 km u jira ki hore.
Amenhotep III iyo xaaskiisa Queen Tiye ay aa ka mid ahaa meydadka loo wareejiyay goob ta nasashada cusub.
Weapons, Ammunition & Explosives Management Advisor
Vacancy code VA/2021/B5001/21579
Duration Ongoing contract (Open-ended, subject to organizational requirements,
availability of funds and satisfactory performance)
Application period 06-Apr-2021 to 21-Apr-2021
The UNOPS Peace and Security Cluster (PSC) is a principal service provider in the field of mine action with the United Nations Mine Action Service (UNMAS), UNDP, UNICEF, Governments of mine-affected countries and other mine action partners. It is led by the Director, who has overall authority and accountability for the performance PSC on behalf of its clients. TheDirector is responsible for administering and providing oversight of the day-to-day management of the Project Field offices, both according to the client requirements and in line with UNOPS rules and regulations.
UNMAS as a component of the United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) provides explosive hazard management capacities, including mitigation, to AMISOM as part of a logistical support package. Non-lethal tactical advice and analysis are delivered by UNMAS technical advisors located in each AMISOM Sector Headquarters and at AMISOM Force Headquarters, who support AMISOM planning and operations. UNMAS support includes both enabling ("operate in spite of IEDs”) and response ("defeat the device”).As a component of the UN Mission in Somalia (UNSOM) UNMAS also supports the Federal Government of Somalia, including the Somali Police Force, Somali Explosive Management Authority and National Security Advisor.
*CANDIDATES WITH NO UN OR UNOPS EXPERIENCE ARE ENCOURAGED TO APPLY *Qualified fe...
Education Advanced University Degree (Master’s Degree or equ...
Contract type:International Contractor Agreement (ICA) Contract leve...
UNOPS is an operational arm of the United Nations, supporting the successful imp..